Inkqubo yoNjongo | Klever ezezimali
Ngoku ungafumana imali yonke imihla ngokubhekisa Klever kubahlobo bakho!
Uhlaziyo 4.2.4 lwazisa ngenkqubo entsha yokudluliselwa apho unokumema abahlobo bakho ukuba Klever Wallet kwaye unyuke ukuya kuthi ga kwi-0.5% yotshintshiselwano ngalunye olwenziwe ngabahlobo bakho Klever Tshintsha!
Njani Klever IMisebenzi yoNyulo
Ungayifumana ngokulula ikhowudi yakho kwimenyu yoSeto, apho unokufikelela ku "Mema abahlobo"
Thumela ikhowudi yakho yokudlulisela kubahlobo bakho kunye Klever uya kukuhlawula ukuya kuthi ga kwi-0.5% yayo yonke into eyenziwa ngabahlobo bakho. Ukutshintsha kufuneka kube ngaphezulu kwe-50 yeedola ze-USD, lo ngumgaqo kuphela wokutshintsha ukuze usebenze kwimbuyekezo yokuthunyelwa.
Ungabanga umvuzo wakho nje ukuba umvuzo ufikelele kwi-1,000 KLV.